Daawo Sawirada sida loo xasuuqay maleeshiyada Al-Shabaab | Gaaloos.com
Home » alshabaab » Daawo Sawirada sida loo xasuuqay maleeshiyada Al-Shabaab
Daawo Sawirada sida loo xasuuqay maleeshiyada Al-Shabaab
Akhristayaasheena sharafta leh waxaan halkan idinkugu soo gudbineynaa sawirro horudhac ah
oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee lagu xasuuqay deegaanka Halkgan ee gobolka Hiiraan,
kuwaasi oo laga dilay 240.
Subaxnimadii maanta waxaa dagaal culus ka dhacay magaalada Halgan ee gobolka Hiiraan. Malayshiyaad ka tirsan al-Shabaab ayaa weerar gaadmo ah oo qorsheysan ku qaadey subaxnimadii maanta oo Khamiis ah, laba saldhig oo ku yaala Halgan.
Weerarkan ayaa ku bilowdey gaari lagu soo xirey bom, inkasta oo wararku sheegayaan in gaarigu qarxay ka hor inta aanu gaarin xerada askarta ee ciidamada Itoobiya ku lahaayeen Halgan, sidoo kale waxaa weerarka ka qaybqaatey afar qof oo kale oo isqarxiyaal ah.
Wasiirka Gaashaandhigga iyo Wasiirka Amniga ayaa shir wada jir ah ku qabtey magaalada Muqdisho.
Wasiirka Amniga Dowladda Federaalka oo saxaafadda la hadley ayaa sheegay in salaadii subax kadib al-Shabaab weerar ku soo qaadeen halgan iyaga o ka yimid afar jiho, waxaana ay weerarkooda la beegsadeen xerada ciidanka Itoobiya iyo xero ciidanka Dowladda. Wasiirka ayaa xaqiijiyey in weerarku ku bilowdey gaari bom laga soo buuxiyey.
Cabdirisaaq Maxamed Cumar Wasiirka Amniga Soomaaliya ayaa sheegay in al-Shabaab ay doonayeen weerar la mid ah kuwii hore, laakiin maanta jab ka raacay, waxaan sheegney markii hore 120 malayshiyaad ah in la diley, waxaana hadda naloo xaqiijiyey in dhimashadoodu ay gaareyso 240 malayshiyaad al-shabaab ah.
Waa tiradii ugu badneyd ee al-Shabaab laga diley tan iyo duulaankii ay ku qaadeen Puntland oo looga diley boqolaal Malayshiyo ah.
Al-Shabaab ayaa dhankooda sheeganaya in ay dileen 60 askeri oo Itoobiyaan ah.
Wasiirka Amniga Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in ciidanka AMISOM waxaa ka geeriyoodey 9 askeri iyo 10 kale o dhaawacmey.
Weerarkan ayaa ha mid qorsheysan waxaana uu aad ugu dhawaa weerarkii Ceel cadde ay al-Shabaab ku qabsadeen haljaasna ku dileen ciidamo aad u badan oo Kenya ka socdey.
Dowladda ayaa ballan qaadey in jabka al-Shabaab la soo bandhigayo.
Title: Daawo Sawirada sida loo xasuuqay maleeshiyada Al-Shabaab
Posted by Unknown, Published at 12:49 AM and have 0 comments